भारतीय कप्तान सुनिल क्षत्रीले नेपाल विरुद्ध शानदार गोल गरे तर, सेलिब्रेसन गरेनन् ! कारण यस्तो - Samadarshi Sanchar
भारतीय कप्तान सुनिल क्षत्रीले नेपाल विरुद्ध शानदार गोल गरे तर, सेलिब्रेसन गरेनन् ! कारण यस्तो
समदर्शी संचार, सोमबार, २१ भदौ, २०७८, बिहानको ०८:४४ बजे
आइतबार नेपाल र भारतबीच भएको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपाल २-१ ले पराजित भयो।
भारतका लागि फारुख चौधरीले ६३ औं र कप्तान सुनिल क्षेत्रीले ८० औं मिनेटमा गोल गरे। भने, २- ० ले पछि परेको नेपालका लागि ८७ औं मिनेटमा तेज तामाङले गोल फर्काएर २- १ को नतिजामा ल्याए ।
संसारका जो कोही खेलाडीले आफूले गोल गरेपछि केही समय सेलिब्रेसन गर्छन् । जुन भारतको तर्फबाट पहिलो गोल गरेका फारुख चौधरीले पनि गरे, र नेपालका लागि एक गोल फर्काएका तेज तामाङले पनि गरे। तर, टिमका कप्तान सुनिल क्षत्रीले भारतलाई २-० ले अगाडि बढाउँदै गर्दा आफूले गोल गरेपनि कुनै सेलिब्रेसन गरेनन् ।
नेपाली मूलका भारतीय खेलाडी सुनिल क्षेत्रीले नेपालविरुद्ध गरेको गोल आफ्नो करियरकै सुन्दर गोल थियो । उनले मैदानको मध्य भागबाटै बललाई अघि बढाएर निकै शानदार फिनिसिङ गरेका थिए । नेपालविरुद्ध उनले गरेको यो पाँचौँ गोल हो ।
सुनिलले उक्त गोल गरेपनि खुसीयाली मनाएनन् । सुनिलकी आमाले कुनै समय नेपालको महिला टोलीबाट खेलेकी थिइन् ।
सुनिलका हजुरबा नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाबाट बेलायती–भारतीय सैनिकमा भर्ती हुन गएका थिए । सायद आफ्ना बाबु बाजेको भूमि भनेर पो सुनिलले नेपाल विरुद्ध गोल हान्दा खुसियाली मनाएनन कि ?